Ikhaya Lomlando eduze ne-Callaway Gardens (B) - I-Airbnb
Ikhaya Lomlando eduze ne-Callaway Gardens (B)
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Antonia
Ikhaya elivuselelwe elinomoya elikhanyayo elineminyaka eyi-100 kumlando wePine Mountain. Imayela elingu-1 ukusuka eCallaway Gardens, amabhulokhi angu-2 ukuya ezitolo zakudala zedolobha, izindawo zokudlela kanye negalaji likaphethiloli. Cishe amamayela ayi-3 kuphela ezindleleni zokuhamba izintaba eRoosevelt State Park. Amamayela ayi-15 ukuya e-Warm Springs nasekotishi likaRoosevelt. Amamayela angu-35 ukusuka eColumbus kanye namamayela angu-70 ukusuka e-Atlanta Airport. Nginolunye uhlu uma kwenzeka iphathi yakho ingabanye abangu-2 futhi ungenankinga ukwabelana nabo ngegumbi lokugezela, bheka isithombe esifanayo esingaphambili kwendlu.
Ikotishi elikhanyayo nelinomoya, elineminyaka engu-100 ubudala, kodwa elisanda kubuyekezwa....ngenkathi ligcina ukunambitheka kwalo komlando. Izitezi zikaphayini zenhliziyo zangempela kuzo zonke ngaphandle kwekhishi nokugeza. Izihlobo zomakhi wokuqala zingitshele ukuthi yakhiwe ngezandla zakhe futhi isohlwini lwe-Pine Mt./Chiply Historical Center.
4.95 · 56 okushiwo abanye
Indawo ekahle endaweni yomlando, uhamba amabhulokhi angu-2 ukuya edolobheni lase-Antique Shops, Amasonto, Izindawo zokudlela, Isikhungo Somlando. Ngiyikhilomitha elilodwa kuphela ukusuka eCallaway Gardens Entrances. Ngibuze ngalokhu. I-Callaway Gardens iyindawo enhle yokugibela ibhayisikili, ukugibela izintaba, ukudlala igalofu nokuphumula ogwini. Kukhona ukuqashwa kwamabhayisikili, isikebhe, i-kayak e-Gardens. Kunemizila eminingi enezimbali kuzo zonke izinkathi zonyaka, i-Camilia's in Winter, i-Azaleas in Spring, namahlamvu amahle ekwindla. Imicimbi eminingi ihlelelwe unyaka wonke. Hlola iwebhusayithi yabo. Kufanele uvakashele i-Butterfly Center kunoma iyiphi isizini. Eduze kunechibi eliyingxenye ye-Roosevelt State Park ozolisebenzisa ehlobo. I-Roosevelt State Park inamakhilomitha angu-23 emigwaqweni yokuhamba ngezinyawo. Kukhona uhambo lokuya ezimpophomeni ezithile kanti nezindawo ezinkulu zegwadle zisendleleni kulo lonke leli paki. Bona lapho u-Roosevelt aphike khona e-Dowells Knob indawo ebukekayo yase-Pine Mt. Valley. E-Warm Springs ungavakashela ikotishi likaRoosevelt kanye ne-Warm Springs Institute. Kunesitolo sokuthengisa amabhayisikili nesokuqasha edolobheni uma ungathanda ukuqasha amabhayisikili edolobheni, umzila wamabhayisikili, noma izingadi: Chipley Cyclery, edolobheni lasePine Mt.
Ujoyine ngo-Julayi 2009
Itholakala njengoba udinga izikhombisi-ndlela, ulwazi ngendawo, nengxoxo. Ngizama ukungangeni endleleni yakho, kodwa ngijabulele ukusebenzelana nezivakashi zami uma zithanda. Kunezikhathi engingatholakala ngocingo kuphela, uma ngiphuma ngeKayaking noma ngihamba uhambo.
Itholakala njengoba udinga izikhombisi-ndlela, ulwazi ngendawo, nengxoxo. Ngizama ukungangeni endleleni yakho, kodwa ngijabulele ukusebenzelana nezivakashi zami uma zithanda. Kunez…